uThami Mdlalose – weMadlula Travel & Tours | eNanda Online
uThami Mdlalose – weMadlula Travel & Tours
Thami Mdlalose uchaza ukuthi wabakanjani umhleli wezokuvakasha
Lalela isiqopha mazwi: Thami Mdlalose
Isiqeshana: Umkhakha wezokuvakasha, umkhakha onganakekile kodwa umkhakha okhulayo kulelizwe. Inanda indawo enhle yokuvakasha uma ufuna umlando, amasiko nezepolitiki. UThami Mdlalose okuwo lomkhakha uchaza kabanzi, ngongakufunda ngalomkhakha.
uThami Mdlalose owakhona eNanda, wabona amathuba omsebenzi emancane, njengomuntu othanda ezokuvakasha wathola usizo ukufunda ngomkhakha wezokuvasha, nokuqala ibhizinisi kulomkhakha, ukuliphatha nakho konke odinga ukukwazi kumkhakha wezokuvakasha. Lolu sizo walithola kwi KZN Tourism ( ababhekelela ezokuvakasha kwindawo yonke yaKwaZulu-Natali) kanye nakwi Durban Tourism (ababhekelela ezokasha ngaphansi komasipala weTheku).
Tags: Thami Mdlalose, Tour Operator
CAPTCHA * three + = nine